တိုးတက်ရာစာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း (၈)လပြည့်???? အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့်
28.8.2021(စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် စာကြည့်တိုက် အဖွဲ့ဝင်များမှ ကျေးရွာအတွင်း MASK များအားစနစ်တကျ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည် ။ ဤသို့လှူဒါန်းမှုနဲ့အတူ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိဘပြည်သူများအား ရာသီပေါ်တုပ်ကွေးနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 ကူးစပ်မြန်ရောဂါဆိုင်ရာ အခြေံခံ ဗဟုသုတများကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ၏ အကူအညီဖြင့် မျှဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် ။
28.8.2021(စနေနေ့) နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ဓမ္မပါလ လူမှုကူညီရေးအသင်း၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရာသီတုပ်ကွေးဆိုင်ရာ အခြေခံဆေးဝါးများအား နေ့လည် (၁) နာရီမှ (၃) နာရီ အထိ ကာလပေါ်ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည် ။
(ဆေးဝါးများမတည်ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ဓမ္မပါလလူမှုကူညီမှုအသင်းအပါအဝင်/ ဆေးဖြန့်ဝေရာတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ကူညီပေးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာမများနှင့်/ စေတနာအလျောက် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ရှာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ညီကိုမောင်နှမများအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မိမိတို့ စာကြည့်တိုက်အသင်းသူ အသင်းတော်သားများမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည် ။)
- ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့> ....…
- ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူများအတွက်
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူများသာ ..…????????
*ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာများ ထပ်မံလှူဒါန်းလိုပါက
- ယခုစာကြည့်တိုက် Facebook Page၏
Chatbox ၌ ၄င်း /
- အရှင် ပညိန္ဒ(မြစ်ခြေ ရွှေစောလူးတော
(09 259 133 973)
- ဆရာမ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး
(09 896 020203)
(09 881 814 796) တို့အား ၄င်း